पाचौँ पटक थपियो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हुने निषेधाज्ञा? के-के गर्न पाइने?के गर्न नपाईने ?यस्तो मोडालिटी - Babal Khabar
चितवन । चितवनमा पाँचौ पटक निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । जेठ २७ गते राति १२ बजेदेखि असार ३ गते राति १२ बजेसम्म लागु हुनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पाँचौ पटक निषेधाज्ञा थप गरेको हो । चौथो पटक थपिएको निषेधाज्ञा जेठ २७ गते राति १२ बजे सकिँदै थियो । स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गरी पाठयपुस्तक विक्री गर्ने पसलहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
अब बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारीहरु न्यूनतम कर्मचारीहरु खटाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी दैनिक रुपमा सञ्चालन गर्न पाइने प्रशासन कार्यलय चितवनले जनाएको छ ।
खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा÷मासु, दूध डेरी लगायतका अत्यावश्यक सामग्री विक्री गर्ने पसलहरु दैनिक बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउने छन् ।
काठमाडौ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजान सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले कोरोनाविरुद्धको खोपको समुचित व्यवस्था गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गदै उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्ने माग गरेको हो ।
निषेधाज्ञा थपिदै गएकाले जनता बाध्य भएर सडकमा आउनु पर्ने वातारणप्रति सरकारले ध्यान दिनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘थपिँदो लकडाउन अवधिका कारण अव जनता स्वयं नै आफ्नो दुःख, पीडा र अभावका कारण बाध्य भई सडकमा आउने सम्भावना प्रवल हुँदै गएको र यस्तो सम्भावित समस्यालाई सरकारले यथोचित सम्बोधन पनि गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा निषेधाज्ञाको अवधि थपिँदै जाँदा समस्या अरू भयावह हुने निश्चित नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो विकट स्थिति आउनुअघि नै सरकारले हाल घटदो क्रममा रहेको संक्रमणको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजानका लागि हामी सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
Prevयुरोकपमा आज हुने ३ खेल, कस कसको, कति बजे ? कसरी हर्ने लाईभ ?
nextगण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेपाली र अन्य मनाङेसहित ४ मन्त्रीले लिए सपथ,पाए यि मन्त्रालय पूरा हेर्नुहोस्।